के हो पेप्टिक अल्सर? जान्नुहोस् यसका लक्षण तथा बच्ने उपाय ! « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
अहिलेको बद्लिदो हावापानी र खानपिनका कारण अधिकाशं मानिसलाई पेटको रोग बढी लाग्ने गर्छ । सबै भन्दा धेरै मानिसलाई लाग्ने रोग भनेको ग्यास्ट्रिक रहेको छ ।
जब हामीलाई यो रोग लाग्छ नी हामीले समयमानै ख्याल गर्न सकेनौ भने हामीलाई अल्सर हुन पुग्छ । जसले आन्द्रामा घाउ हुने गर्छ पछि यो रोग जटिल बन्दैगइ क्यान्सरमा परिनतभइ हाम्रो जिवन लिलानै समाप्त अर्थात मृत्युको शिकार हुन पुग्छौँ ।
त्यसैले आज हामी तपाई लाई पेप्टिक अल्सर भनेको के हो? यो कसरी हुने गछ? यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्नेबारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौ ।
पेप्टिक अल्सरको कारण
पेप्टिक अल्सरको लक्षण
मा एसिडिटी हुने, पेट फुल्ने, ग्याँस बन्ने, पखाला लाग्ने, कब्जियत, वान्ता हुने आदि प्रमुख हुन ।
गर्न नहुने कुराहरु
पेट वा सानो आन्द्राको पर्खालमा प्वाल पर्छ जसले आन्द्रामा गम्भिर संक्रमणको खतरा बढ्छ । पेप्टिक अल्सरले पेटको तन्तुहरुलाई पनि क्षतिग्रस्त गर्न सक्छ जसले पाचन मार्गमा भोजन प्रवाहमा बाधा पुर्याउँछ यसै कारण पेट छिटै भरिने उल्टी हुने र तौल कम हुने समस्या हुन्छ । स्वास्थ्य पत्रपत्रिका
बर्तमान समयमा धेरै मानिसहरु अस्वस्थकर जीवनशैलीका कारण मानिसहरु विभिन्न प्रकारका रोगहरुबाट ग्रसित बन्ने गरेका छन्